Korneel BARRE HIIRAALE Oo Hanjabaad Culus U Soo Diray AXMED MADOOBE - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Korneel BARRE HIIRAALE Oo Hanjabaad Culus U Soo Diray AXMED MADOOBE
Korneel BARRE HIIRAALE Oo Hanjabaad Culus U Soo Diray AXMED MADOOBE
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya Korneel Barre Hiiraale ayaa ka hadlay Khilaaafka u dhaxeeyo dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland.
Korneel Barre Hiiraale ayaa madaxweynaha Jubbaland uga digay inuuu in uu is hor istaago taliyaha dhawaan loo magacaabay qaynta 43 ee deeganka Jubbaland.
Hiraale oo qoraalo oo uu soo dhigay baraha bulshada iyo waraysi uu siiyay idaacad ku taala dalka Kenya ku sheegay in ay tahay qalad in la is hor istaago shaqada Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed.
Korneel Barre Hiiraale oo ciidan isaga ka amar qaata ay hadda ku sugan yihiin duleedka magaalada Ceel Waaq ayaa u muuqada mid ka biyo diidan awooda Dowlada Goboleedka Jubbaland. Hadalada Barre Hiraale ayaa waxa laga dha-dhansanayaa in uu rabo in dagaal beeleed laga abuuro deeganada Jubbaland.
Labo asbuuc ka hor ayaa ay ahayd markii beesha Mariixaan ku kulmeen magalaada Nayroobi taaso oo la isku waafaqay in ciidan beleedka Mareexaan xarumo looga furo deeganada Ceel Waaq iyo duleedka Magaalada Dhoobley.
Waxa muuqato in MW Farmaajo qorsheeynayo in degaal lagu qaado MW Axmad Madoobe inta aan la gaarin doorashada Madaxwaynaha Jubbaland..
Waxaa hore u jiray Khilaaf soo kala dhex galay Barre Hiiraale iyo Ahmed Madoobe bilowgii Maamulka Jubbaland markaas oo ay labada siyaasi isku qabteen ciddii talada qaban laheyd inkastoo Axmed Madoobe uu garab ka helay dowladda Kenya.
Barre Hiiraale ayaa muddo badan ku jiray duurka wuxuuna mar heshiis la galay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madoobe lamana ogo halka uu ku dambeyn doono khilaafka cusub.
Barre Hiraale ayaan hadda heyn wax xil ah wuxuuna muddo badan u dagaalmi jiray inuu kursiga ku fadhiisto inkastoo uu mar soo qabtay xil wasiir.